एक साताका लागि सिन्धुपाल्चोक लकडाउन,के गर्न पाइने के गर्न नपाइने ? « Pen Nepal
एक साताका लागि सिन्धुपाल्चोक लकडाउन,के गर्न पाइने के गर्न नपाइने ?
Published On : 16 August, 2020 8:10 am By : पेननेपाल
सिन्धुपाल्चोक । छिमेकी जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण बढेको र जिल्लामा पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने देखिएकाले जनाई भदौ १ गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ । शनिबार बसेको जिल्ला कोभिड –१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले एक सातासम्मका लागि जिल्लामा बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको हो ।